Ny Torah (תּוֹרָה), izay midika hoe "lalàna", dia fitambaran' ireo boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly amin' ny teny hebreo (Tanakh). Izy no fizaràna voalohany ao amin' ny Tanakh, eo alohan' ny Nevi'im sy ny Ketuvim. Indraindray dia atao hoe "Boky dimin' i Mosesy (na Môizy)" izy ireo. Ao amin' ny Baiboly kristiana dia ireto ireo boky ireo: ny Genesisy (na Jenezy) sy ny Eksôdosy (na Esaody) sy ny Levitikosy (na Levitika) sy ny Nomery (na Fanisana) ary ny Deoterônômia (na Deoterônômy). Ny fitambaran' ireo no tondroina koa amin' ny hoe Pentateoka na ao amin' ireo asa soratra kristiana.
Horonan-tsoratry ny Torah
2 Ireo boky ao amin' ny Torah
3 Torah am-bava
Ny teny hoe תּוֹרָה / Torah dia teny hebreo izay midika hoe "lalàna", "toromarika" na "fampianarana".
Ireo boky ao amin' ny TorahHanova
Ireto avy ny anaran' ny boky ao amin' ny Torah amin' ny teny hebreo:
ספר בראשית / Sefer Bereshit ("Tamin' ny voalohany"): Genesisy na Jenezy
ספר שְׁמוֹת / Sefer Shemot ("ireo Anarana"): Eksôdosy na Eksaody
ספר ויקרא / Sefer Vayikra ("Ary niantso Izy"): Levitika na Levitikosy
ספר במדבר / Sefer Bemidbar ("Tany an-tany efitra"): Nomery
ספר דְּבָרִים / Sefer Devarim ("ireo Teny"): Deoterônômy na Deoterônômia
Ny Torah am-bava, izay atao amin' ny teny hebreo hoe תורה שבעל פה / Torah SheBe'al Pe, dia ny foto-pampianarana sy ny tahirin-dahateny nampitaina am-bava ao amin' ny fivavahana jiosy, sy fanampin' ny "Torah voasoratra" (Lalàna voasoratra).
Araka ny finoan' ny jodaisma rabinika ny Torah am-bava dia tokony tsy hivaona amin' ny endriny voalohany tamin' ny nanolorana azy tany Sinay (na Sinaia), ka noho izany dia mila olona mpamerimberina (hebreo: תנאים / Tannaim) izay miantoka ny fampitana ny fampianarana sy mamerina ny teny nampitana azy hatramin' ny voalohany. Mivoatra ny fivoasana ny Torah.
Am-bava tokoa io lovantsofina io tamboalohany, nefa taty aoriana dia nampandrina an-tsoratra amin' ny ampahany izy ireo tamin' ny taonjato voalohany ao amin' ny Midrasa (hebreo: מִדְרָשׁ / Midrash) sy ny Misna (hebreo: משנה / Mishnah) ary ao amin' ny Talmoda (hebreo: תַּלְמוּד / Talmud) sy ny Fifamaliana (hebreo: שאלות ותשובות / She'elot uTeshuvot) ary ny asa soratry ny Raby taty aoriana.
Fizaràn' ny Baiboly hebreo
Tanakh - Nevi'im - Ketuvim
Fivoasana ny Baiboly hebreo
Torah am-bava - Midrasa - Talmoda - Mishnah - Gemarà - Halakà - Agadà
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Torah&oldid=1041813"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 20:29
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 20:29 ity pejy ity.